» रुपन्देहीमा ८ जना शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टिपछि विद्यालय बन्द
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १२:३०
बुटवल, रूपन्देहीको कालिका मानविज्ञान विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहित ८ जना शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ । नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण प्रवेश गरेसँगै समुदाय स्तरमै पुगेकाले विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विद्यालय बन्द गरिएको हो ।
रूपन्देहीमा हालसम्म एउटै विद्यालयमा यति धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो । करिब ८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सो विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी कोरोना संक्रमणमा परेपछि संक्रमणबाट जोगाउन विद्यालय बन्द गरिएको प्रधानाध्यापक विष्णुहरि ज्ञवालीले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विद्यालय बन्द गरिएको हो । ज्ञवालीका अनुसार कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन भइरहेका कारण थप ३ दिन मात्र सञ्चालन गर्ने र अन्य कक्षा केही समय अनलाइनमार्फत चलाउने निर्णय भएको छ । रूपन्देही लगायत विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो भेरियन्टको कोरोना केही विद्यालयमा पनि देखिन थालेपछि पुनः शैक्षिक संस्था बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरको छ ।
प्याब्सनले भने विद्यालय बन्द गर्न नहुने तर्क पेस गर्दै आएको छ । केही दिनयता विद्यालय स्तरमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्न थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताएका छन् ।
संक्रमण रोक्न सबैको सजगता र सचेतना आवश्यक रहेको बताउँदै डा. गिरीले सरकारले निर्धारण गरेका जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारी दिएका छन् ।